I-Semalt: 6 I-White Hat ye-SEO Izindlela Zokukhuthaza Ukuhamba Kwezokudlulisa
Bonke abakwa-webmasters bafuna ukushayela imoto eminingi kumawebhusayithi abo, kodwa bambalwa babo abafeza umsebenzi. Ngamanye amazwi, singasho ukuthi ukuhanjiswa kwe-traffic yindlela kuphela yokuthola okuningi kokubuka nokushaya kwiwebhusayithi yakho, kodwa yingxenye ye-hat ye-SEO emnyama. Uma ufuna ukukhiqiza ithrafikhi yekhwalithi, kuzomele ulandele imithetho nemigomo ye-Google futhi usebenzise amasu we-SEO amhlophe.
U-Alexander Peresunko, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , uhlinzeka ngezindlela ezimhlophe zokukhwabanisa ukushayela inani elikhulu lokudlulisela izimoto kuwebhusayithi yakho.
Indlela 1. Qhubeka Amawebhusayithi e-Q & A
Ama-Q & A amasayithi afana ne-Yahoo Izimpendulo ne-Quora ayimthombo omuhle wokuhamba kwezimoto. Uma unebhizinisi elincane futhi ufuna ukulikhula emavikini ambalwa, akufanele uchithe isikhathi sakho lapha nalapha futhi usebenze kokubili kulawa mawebhusayithi.
Ngaphambi kokuqala ingxoxo, kufanele uqaphele isihloko, isigaba kanye nemishwana yokusesha efanelekile kuwebhusayithi yakho. Ayikho indlela yokuphendula imibuzo ngamaqembu lapho izihloko zendawo yakho zingakhulumi ngaso. Ngaphandle kwalokho, ungaqala ingxoxo yakho bese udala iqembu elihlukile, ukuheha abantu abaningi kuwebhusayithi yakho ngokushiya isixhumanisi ngaphakathi kombuzo. Ungabeka izixhumanisi eziningi zewebhusayithi yakho ehlobene nokuqukethwe kombuzo bese uthela abanye abantu ukuthola inani elikhulu lomgwaqo.
Indlela 2. Yakha Umkhankaso Wokukhangisa Ividiyo
Lezi zinsuku, abantu abaningi banesithakazelo ku imikhankaso yokukhangisa ividiyo , ngakho-ke kufanele udale umkhankaso wemikhankaso njalo ngesonto. Qinisekisa ukuthi zihambisana newebhusayithi yakho ukuze ukwazi ukukhomba izilaleli ezifunayo.
Isinyathelo sokuqala ukuqaphela nokukhomba isisusa somkhankaso wakho..Okulandelayo, kufanele ucaciswe ngesihloko ofuna ukuxoxa ngaso kokuqukethwe kwevidiyo yakho bese usebenzisa ucingo-isenzo sokushayela izinyathelo eziningi ngokwengeziwe emaminithini. Ungakhohlwa ukurekhoda nokushicilela amavidiyo ku-YouTube futhi uqhubeke nokukhuthaza isiteshi sakho.
Indlela 3. Sebenzisa i-Curation Content
Indlela yesithathu isebenzisa i-curation yokuqukethwe. Kuyisikhathi esiningi, kepha ukwelashwa okuqukethwe kungenye yezindlela eziwusizo kakhulu futhi ezimangalisayo zokushayela inani elikhulu lomgwaqo wekhwalithi kuwebhusayithi yakho. Futhi, kukusiza ukwakha ama-backlink esemgangathweni ngaphakathi kwamahora. Kufanele njalo ulandele okuqukethwe okubandakanya nokwazisa futhi ugweme ukukopisha umsebenzi wabanye. Kufanele ibe yinto yokuqala futhi ingasetshenziswa kumawebhusayithi afana ne-Storify no-Scoop.it.
Indlela 4. Umkhankaso wokukhangisa we-Influencer
Umkhankaso wokukhangisa wethonya kuyindlela enhle futhi enamandla yokuphakamisa isayithi noma umkhiqizo wakho ngaphambi kwenani labantu elibalulekile. Lezi zinsuku, abathengisi abaningi be-digital basebenzisa leli qhinga ukukhuthaza amabhizinisi abo kanye nemikhiqizo kwi-intanethi. Ama-influencers azinhlobo ezahlukene, kodwa abathonya abaningi abadume kakhulu bangabantu abadumile, abathintekayo, abachwepheshe bomlando kanye nababhlogi be-blogger. Ungabambisana nabanye babo ukujabulela izinzuzo eziphezulu zesayithi noma umkhiqizo wakho.
Indlela 5. Joyina i-Forum yokuthumela amawebhusayithi
Amaforamu e-inthanethi yindlela enhle yokwenza ithrafikhi yekhwalithi. Ungakwazi ukujoyina amaforamu ambalwa adumile nokuthunyelwe mayelana newebhusayithi yakho. Zama ukubandakanya abantu abaningi ngokusebenzisa izingxoxo bese ushiya izixhumanisi zesayithi lakho engxoxweni.
Indlela 6. Sebenzisa i-Social Media
Kufanele wenze ukusetshenziswa okuhlakaniphile kwezingosi zokuxhumana zenhlalo ukushayela ithrafikhi yekhwalithi kuwebhusayithi yakho. I-Facebook, Twitter, LinkedIn, i-Google + ne-Instagram ziwumthombo omuhle kakhulu wokuthuthukisa okuqukethwe kwakho kwi-intanethi. Zama ukuthola okuningi okuthandayo, ukwabelana, ukuphawula, kanye nabalandeli ngokulandela imithetho nemigomo yewebhusayithi yokuxhumana nabantu. Yaba okuqukethwe kwakho emiphakathini ye-Facebook kanye ne-tweet njalo. Kufanele ibe yintsha, eyabelanayo futhi efundisayo Source .